Zim Government Returns Seized German Owned Farms – RadioVop Zimbabwe
Zim Government Returns Seized German Owned Farms
Germany’s deputy Ambassador to Zimbabwe, Matthias Schuhmacher, said in an interview in Harare that the embassy had managed to force the Zimbabwean government stop the invasions of Germany properties in the Eastern Highlands.
The embassy wrote a stinging letter recently threatening to withdraw aid if the seized properties were not returned. It argued that the take over of the land was in violation of a bilateral trade pact signed between Zimbabwe and Germany.
“After strongly lobbying for the Zimbabwean government to influence these invasions, I am happy to tell you now that indeed they have stopped and the affected properties are up and working again and we appreciate that very much,” he said.
On June 18 an armed mob of Zanu (PF) upporters invaded Makandi Tea Estate and Coffee (pvt)limited ,Border Timbers Limited and Forester (pvt) ltd owned by a Germany citizen, Heinrich vonPezold.
The properties are covered by an investment protection agreement signed by Zimbabwe and Germany in 1995 but came into force in 2000.
Previous PostAnger Over Mandela 'Corpse' PaintingNext PostVillagers Call for Media Plurality And Truth Commission